PressReader - Kwayedza: 2018-10-19 - ‘Rimai mbeu dzinoshingirira muzuva’
Kwayedza - 2018-10-19 - Nhau Dzevarimi - Kingstone Mapupu
VaWally Zonge (43) vanova mushandi anoona nezvekutengeswa uyewo vari murimisi kukambani iyi vanoti vari kuvandudza mbeu dzinorimwa kunzvimbo dzisinganaye mvura yakaringana. “Sekambani, donzvo redu nderekushanda nevarimi mumbesa diki dzinoshingirira muzuva. Takanyanya kutarisana nematunhu anoti Uzumba Maramba Pfungwe, Murewa, Mutoko, Mudzi neTsholotsho uko kusinganaye mvura zvakanaka. Tinotarisira kuramba tichipambira kune mamwe matunhu,” vanodaro. Kambani iyi inouchika mbeu dzinosanganisira chibage, mhunga, mapfunde, bhinzi nenyemba.